ဗော့စတော့ ၁ (ရုရှား: Восток-1, East 1 or Orient 1) သည် ဗော့စတော့စီမံကိန်း၏ပထမဆုံးအာကာသပျံသန်းမှုဖြစ်ပြီး လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ပထမဆုံးလူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၁၊ ဧပြီ ၁၂ တွင် လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ ပျံသန်းမှုတွင် ဆိုဗီယက်အာကာသယာဉ်မှူး ယူရီဂါဂါရင် အာကာသသို့ လိုက်ပါသွားသည်။ ပျံသန်းမှုသည် အာကာသသို့လူသား ပထမဆုံးရောက်ရှိမှုဖြစ်ပြီး လူလိုက်ပါသောယာဉ်ဖြင့် ပထမဆုံးကမ္ဘာပတ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဗော့စတော့ ၁ကို ဆိုဗီယက်အာကာသစီမံကိန်းကလွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကီရင်ကီရင်မော့ဗ်နှင့်အခြားသူများ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ဆာဂေးကိုရိုလက်ဗ်ဦးဆောင်သည့် ဆိုဗီယက်သိပ္ပံပညာရှင်များက ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 
51.270682°N 45.99727°E﻿ / 51.270682; 45.99727
အာကာသယာဉ်သည် ကမ္ဘာကိုတစ်ကြိမ်တည်းသာပတ်ခဲ့သည်။ (to this date the shortest orbital manned spaceflight). တရားဝင်မှတ်တမ်းများအရ ယာဉ်စတင်ပစ်လွှတ်ချိန်မှပြန်လည်ဆင်းသက်ချိန်အထိ စုစုပေါင်း ၁၀၈ မိနစ်ကြာခဲ့သည်။ ဂါဂါရင်သည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အမြင့် ၇ ကီလိုမီတာ(၂၃,၀၀၀ ပေ)ခန့်တွင် လေထီးဖြင့်ခုန်ထွက်ပြီး အာကာသယာဉ်မှသီးခြားဆင်းသက်ခဲ့သည်။ Due to the secrecy surrounding the Soviet space program at the time, many details of the spaceflight only came to light years later, and several details in the original press releases turned out to be false.
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဂြိုဟ်တုဖြစ်သည့် စပွတ်နစ် ၁ အား ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှ ၁၉၅၇ တွင်လွှတ်တင်ခဲ့ချိန်မှစတင်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြားတွင် အာကာသပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံလုံးသည် အာကာသပျံသန်းခြင်းနည်းပညာလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးလိုကြပြီး ပထမဆုံးလူလိုက်ပါသည့်အာကာသယာဉ်ကို အောင်မြင်စွာလွှတ်တင်လိုကြသည်။ ဤအတွက်လုပ်ဆောင်နေသော ဆိုဗီယက်စီမံကိန်းမှာ ဗော့စတော့စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ်မလွှတ်တင်မီတွင် ဆိုဗီယက်တို့သည် ဗော့စတော့ဒုံးပျံများနှင့်ဗော့စတော့အာကာသယာဉ်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စမ်းသပ်ရေးအတွက် ၁၉၆၀၊ မေလနှင့် ၁၉၆၁၊ မတ်လကြားကာလတွင် လူမဲ့ခရီးစဉ်များစွာကိုလွှတ်တင်ခဲ့ကြသည်။ ဤခရီးစဉ်များတွင် အမျိုးမျိုးသောအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးလွှတ်တင်ခဲ့သည့် လူမဲ့ခရီးစဉ် Korabl-Sputnik4နှင့် Korabl-Sputnik5တို့မှာ အပြည့်အဝအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြပြီး လူလိုက်ပါနိုင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ယူရင်ဂါဂါရင်သည် ဗော့စတော့ ၁ ၏တစ်ဦးတည်းသောယာဉ်အဖွဲ့သားဖြစ်သည်။ ဗော့စတော့အာကာသယာဉ်များသည် ယာဉ်မှူးတစ်ဦးသာတင်ဆောင်နိုင်ရန်ပုံစံထုတ်ထားသည်။ ပင်မအရံနှင့်ဒုတိယအရံအာကာသသူရဲကောင်းများမှာ Gherman Titovနှင့်Grigori Nelyubovတို့ဖြစ်သည်။ စီစဉ်မှုများကို ခရီးစဉ်မတိုင်မီ လေးရက်အလို ဧပြီ ၈ တွင် တရားဝင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာရှင်အာကာသူရဲကောင်းများအကြားတွင် ဂါဂါရင်မှာ လပေါင်းများစွာကတည်းက ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သည်။ :262,272
ခရီးစဉ်တွင်မည်သူလိုက်ပါပျံသန်းမည် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာ နီကိုလိုင်ကမန်နင်( Nikolai Kamanin)ပေါ်လုံးဝမူတည်နေသည်။ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့ဒိုင်ယာရီတွင် ကမန်နီက သူသည် ဂါဂါရင်နှင့်တီတော့ဗ် မည်သူ့ကိုရွေးရမည်ကိုမဆုံဖြတ်နိုင်သေးကြောင်းရေးသားထားသည်။  He wrote: "The only thing that keeps me from picking [Titov] is the need to have the stronger person for the one day flight." Kamanin was referring to the second mission, Vostok 2, which would lastafull day, compared to the relatively short single-orbit mission of Vostok 1. ဂါဂါရင်နှင့်တီတော့ဗ်တို့အား ဧပြီ ၉ ရက်နေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိရှိစေခဲ့ရာ ဂါဂါရင်မှာများစွာဝမ်းမြောက်ခဲ့ပြီး တီတော့ဗ်မှာစိတ်ပျက်သွားခဲ့သည်။  On April 10, this meeting was reenacted in front of television cameras, so there would be official footage of the event. This included an acceptance speech by Gagarin. As an indication of the level of secrecy involved, one of the other cosmonaut candidates, Alexey Leonov, later recalled that he didn't know who was chosen for the mission until after the spaceflight had begun.
ဂါဂါရင်သည် ပျံသန်းမှုမတိုင်မီ ဆရာဝန်အဖွဲ့နှင့်ဆေးစစ်ခြင်းခံယူရသည်။ One doctor gave her recollection of the events in an interview with RT in April 2011: "Gagarin looked more pale than usual. He was unsociable and quiet, which was not like him at all. He would answer by nodding orashort 'yes' to all questions. Sometimes he would start humming some tunes. This wasadifferent Gagarin. We geared him up, and hugged. And I said, "Yuri, everything will be fine." And he nodded back."
နောက်ပိုင်းဗော့စတော့ခရီးစဉ်များနှင့်မတူသည်မှာ အာကာသယာဉ်မှအချက်ပြမှုကိုဖမ်းယူမည့်လမ်းကြောင်းရှာသင်္ဘောမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအစား အာကာသယာဉ်ကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တည်ရှိသော အမိန့်ပေးနေရာများဟုခေါ်သော မြေပြင်အခြေစိုက်စခန်းများကွန်ရက်အပေါ်အားထားခဲ့ရသည်။ 
ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကို အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် သို့မဟုတ်မြေပြင်စခန်းမှထိန်းချုပ်မည်ဖြစ်သည်။ This was because medical staff and spacecraft engineers were unsure howahuman might react to weightlessness, and therefore it was decided to lock the pilot's manual controls. In an unusual move,acode to unlock the controls was placed in an onboard envelope, for Gagarin's use in case of emergency.:278 But prior to the flight, Kamanin told Gagarin the code anyway.
ဂါဂါရင်အား ၁၉၆၁၊ ဧပြီ ၁၁ တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် အီးစီဂျီမှတ်တမ်းအား မော်စကိုမြို့ရှိ အာကာသအောက်မေ့ဖွယ်ပြတိုက်တွင်ပြသထားသည်။
၁၉၆၁၊ ဧပြီ ၁၁ မနက်၌ ဘီကိုနာအာကာသလွှတ်တင်ရေးစခန်းတွင် ဗော့စတော့-ကေ ဒုံးပျံ သည် ဗော့စတော့ ၃ ကေအေ အာကာသယာဉ်တွဲလျက်သားဖြင့် ပစ်စင်ဆီသို့ မိုင်ပေါင်းများစွာအဝေးမှ ရေပြင်ညီအနေအထားဖြင့်သယ်လာကြသည်။ ပစ်စင်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင် ဆာဂေးကိုရိုလက်ဗ်ကဒုံးပျံနှင့်အာကာသယာဉ်ကို စစ်ဆေးသည်။ ထူးခြားမှုမတွေ့ရသဖြင့် ဒုံးပျံအားထောင်လိုက်သည်။  At 10 am (Moscow Time), Gagarin and Titov were givenafinal review of the flight plan. They were informed that launch was scheduled to occur at 9:07 am Moscow Time. This time was chosen so that when the spacecraft started to fly over Africa, which was when the retrorockets would need to fire for reentry, the solar illumination would be ideal for the orientation system's sensors.
မော်စကိုစံတော်ချိန် နံနက် ၅:၃၀ တွင် ဂါဂါရင်နှင့်အရံလူ တီတော့ဗ်တို့အားနှိုးကြသည်။  They were given breakfast, assisted into their spacesuits, and then were transported to the launch pad. ဂါဂါရင်သည် ဗော့စတော့ ၁ အာကာသယာဉ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ဒေသစံတော်ချိန် ၇:၁၀(နိုင်ငံတကာစံတော်ချိန် ၀၄:၁၀)တွင် ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှုစနစ်စတင်သည်။  ဂါဂါရင် ဗော့စတော့ ၁ အာကာသယာဉ်ထဲသို့ထပ်မံဝင်ရောက်ပြီးနောက် အာကာသယာဉ်မောင်းခန်းကင်မရာနှင့်ဆက်ထားသော ထိန်းချုပ်ခန်းရှိ ရုပ်မြင်သံကြားမြင်ကွင်းတွင် ဂါဂါရင်၏ရုပ်ပုံပေါ်လာသည်။ နောက်ထပ် ၂ နာရီကြာသည့်တိုင် လွှတ်တင်ခြင်းမပြုသေးပေ။ ထိုအတောအတွင်း ဂါဂါရင်သည် ယာဉ်ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ၊ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဆာဂေကိုရိုလက်ဗ်၊ နီကိုလိုင်ကမန်နင်၊ အခြားသူအနည်းငယ်တို့နှင့်စကားလက်ဆုံကျနေသည်။  စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွဲပြီးဆုံးပြီးနောက် ဂါဂါရင် ယာဉ်ထဲဝင်ရောက်ပြီး မိနစ် ၄၀ အကြာတွင် ဂယ်ပေါက်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ အဆို့မလုံကြောင်းတွေ့ရသဖြင့် စက်ပိုင်းပညာရှင်များသည် ဝက်အူတိုင်များဖြုတ်ချပြီး ဂယ်ပေါက်ကိုထပ်မံဆို့ရသည်။.
ထိုအတောအတွင်း ဂါဂါရင်က ရေဒီယိုမှသီချင်းဖွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်။  Sergei Korolev was very nervous in the lead up to the launch; he experienced chest pains, and tookapill to calm his heart. Gagarin, on the other hand, was described as calm; about half an hour before launch his pulse was recorded at 64 beats per minute.
06:07 UT Launch occurs from the Baikonur Cosmodrome Site No.1. Korolev radioed, "Preliminary stage..... intermediate..... main..... LIFT OFF! We wish youagood flight. Everything is all right." Gagarin replied, "Поехали! (Here we go!)."
ဗော့စတော့ ၁ ၏အထိန်းခုံအစိတ်အပိုင်း
06:21 UT တွင် ဗော့စတော့ ၁ သည် ကမ်ချက်ကားကျွန်းဆွယ်(Kamchatka peninsula)ပေါ်ဖြတ်ကျော်သွားပြီး and out over the North Pacific Ocean. Gagarin radios, "...the lights are on on the descent mode monitor. I'm feeling fine, and I'm in good spirits. Cockpit parameters: pressure 1; humidity 65; temperature 20; pressure in the compartment 1; first automatic 155; second automatic 155; pressure in the retro-rocket system 320 atmospheres...."
06:51 UT Gagarin reports the sun-seeking attitude control system has been switched on. The sun-seeking attitude control system is used to orient Vostok 1 for retrofire. The automated orientation system consisted of two redundant systems: an automatic/solar orientation system andamanual/visual orientation system. Either system could operate the two redundant cold nitrogen gas thruster systems, each with ၁၀ kg (၂၂ lb) of gas.
At 07:25 UT, the spacecraft's automatic systems brought it into the required attitude (orientation) for the reentry engine firing, and shortly afterwards, the engine firing occurred, also known as retrofire. This took place over the west coast of Africa, near Angola, about ၈,၀၀၀ km (၅,၀၀၀ mi) from the desired landing point. The liquid-fueled retrorockets fired for about 42 seconds.
ဗော့စတော့ ၁ ထိပ်ဖူးအား RKK Energiya museumတွင်ပြသထားပုံ
At 07:55 UT, when Vostok 1 was still7km from the ground, the hatch of the spacecraft was released, and two seconds later Gagarin was ejected. At ၂.၅ km (၈,၂၀၀ ft) altitude, the main parachute was deployed from the Vostok spacecraft. Two schoolgirls witnessed the Vostok landing and described the scene: "It wasahuge ball, about two or three metres high. It fell, then it bounced and then it fell again. There wasahuge hole where it hit the first time."
ဂါဂါရင်၏လေထီးချက်ချင်းပွင့်သွားပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အကြာ နိုင်ငံတကာစံတော်ချိန် 08:05 တွင် ဂါဂါရင်မြေပြင်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဂါဂါရင်ရောအာကာသယာဉ်ပါ ၂၆ km (၁၆ mi) south west of Engels, in the Saratov region at 51.270682°N 45.99727°E﻿ / 51.270682; 45.99727လေထီးဖြင့်ဆင်းသက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ . It was 280 km to the west of the planned landing site (near Baikonur).
When Soviet officials filled out the FAI papers to register the flight of Vostok 1, they stated that the launch site was Baykonur at 47°22′00″N 65°29′00″E. In reality, the launch site was near Tyuratam at 45°55′12.72″N 63°20′32.32″E, ၂၅၀ km (၁၆၀ mi) to the south west of "Baykonur". They did this to try to keep the location of the Space Centerasecret.:284 In 1995, Russian and Kazakh officials renamed Tyuratam Baikonur.
Google Maps – Vostok 1 Landing Site – Monument။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Google Maps – Vostok 1 Landing Site – Monument Photo။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Bond၊ Peter (ဧပြီ 7, 2003)၊ "Obituary: Lt-Gen Kerim Kerimov"၊ The Independent၊ London၊ ဧပြီ 13, 2009 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ ဇန်နဝါရီ 13, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
Siddiqi၊ Asif A.။ Challenge To Apollo: The Soviet Union and the Space Race, 1945–1974။ NASA။
Burgess and Hall, p.140
Quoted in Burgess and Hall, p.140-141
Burgess and Hall, p.141. The press said that Titov was so happy for Gagarin that he almost kissed him, but Titov denies this – Burgess and Hall, p.145.
Siddiqi, p.272, also Burgess and Hall, p.142
Burgess and Hall, p.151
Hall and Shayler, p.148-149
Burgess and Hall, p.156
Burgess and Hall, p.150
Burgess and Hall, p.151. Duringapost-flight press conference on April 15, Alexander Nesmeyanov claimed that Gagarin tookasleeping pill. Also, Siddiqi, p.273, claims that they were both asleep at 9:30 pm when Korolev came to visit them, but Burgess and Hall, p.151, says Korolev spoke with them at this time.
Siddiqi, p.273; Inapost-flight press conference, Gagarin also stated that he slept well.
Burgess and Hall, p.153.
Burgess and Hall, p.153
Siddiqi, p.276; neither Siddiqi, nor Hall and Shayler claim that music was actually played after this request.
Siddiqi describes is asa"tranquilizer pill", while Hall and Shayler describe it asa"cardiac pill".
Руденко М. И.။ "Тогда Юра вернулся на землю не из космоса, а с того света!.."၊ интернет-газета "Русская Берёза"၊ May–June – 2008။ 2011-03-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"UPI Radio – 1961 Year In Review"။ UPI Audio Networkhttp://www.upi.com/Audio/Year_in_Review/Events-of-1961/12295509433760-1။ |series= လွဲမှား သို့ မပါရှိ (အကူအညီ)
Arthur Krock, "In The Nation; Concentration of Science on Outer Space," New York Times p. 28, April 14, 1961. "But because of the distrust that now exists among the great nations, and has plunged them into huge programs of deadly rearmament, an achievement by one which carriesaclear and direct potential of military supremacy engenders fear of its use.... And so it has become as impossible for either of the groups divided by the Cold War to welcome unreservedly such feats as Major Gagarin's in the opposite camp."
"Opinion of the Week: At Home and Abroad," New York Times p. E11 (April 16, 1961). Quotes of reactions from many US and international sources.
"Man in Space", New York Times p. E1 (April 16, 1961).
Harry Schwartz, "Moscow: Flight is taken as another sign that communism is the conquering wave," New York Times p. E3 (April 16, 1961).
"The Cruise of the Vostok"၊ Time၊ April 21, 1961။ November 5, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Google Maps – Vostok 1 Landing Site – Monument Park Location – Satellite photo။ 2010-12-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Google Maps – Vostok 1 Landing Site – Rocket Monument photo။ 2010-12-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Google Maps – Vostok 1 Landing Site – Yuri Gagarin Statue photo။ 2010-12-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Amos၊ Jonathan။ "Movie recreates Gagarin's spaceflight"၊ BBC News၊ March 23, 2011။ March 27, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Tattoo Archive – Vostok။ 22 January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Colin Burgess, Rex Hall (ဇွန် 2, 2010)။ The first Soviet cosmonaut team: their lives, legacy, and historical impact။ Praxis။ p. 356။ ISBN 0-387-84823-1။
Rex Hall, David Shayler (မေ 18, 2001)။ The rocket men: Vostok & Voskhod, the first Soviet manned spaceflights။ Springer။ p. 350။ ISBN 1-85233-391-X။
(ရုရှား) transcript of Gagarin's radio conversations with ground stations, starting 2hrs before launch, and other related documents